रेस्टुरेन्टमा एक्स्ट्रा ‘भ्याट’ र ‘सर्भिस चार्ज’ ? सरकार भन्छ नतिर्नुस् | Ratopati
personमदन ढुङ्गाना exploreकाठमाडौं access_timeसाउन २५, २०७५ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ । सामान्यतः मानिसहरू खाजा खानका लागि रेस्टुरेन्टमा पुग्छन् । मेनु हेरेर खाजा माग्छन् र खान्छन् । रेस्टुरेन्टबाट निस्कने बेलामा बिल मागिन्छ । तर बिल भने मेनु प्राइसमा करिब २५ प्रतिशत रकम जोडेर बिल दिइन्छ ।
यसको कारण हो मेनु प्राइसमा थप १० प्रतिशत सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट जोडिनु ।
यी ४ आइटमको मेनु प्राइस १ हजार ६ सय पुगेको छ । तर क्याफेले बिल जारी गर्दा १ हजार ६ सयमा १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज (सेवा शुल्क) जोडेर १ हजार ७ सय ६० रुपियाँ पुर्याएका छन् । सेवा शुल्कसहितको मूल्यमा फेरि १३ प्रतिशत भ्याट अर्थात् २ सय २९ रुपियाँ थप गरेर १ हजार ९ सय ८९ रुपियाँ ग्राहकसँग लिइएको छ ।
तर जब हामीले बिल माग्यौँ । हामीलाई सोधियो ‘सादा बिल ल्याउने कि भ्याट बिल ?’ हामीले यी दुई बिलको अन्तरबारे सोध्यौँ । रेस्टुरेन्टका वेटरले भ्याट बिल लिने भए १३ प्रतिशत एक्स्ट्रा लाग्ने बताए । यद्यपि सर्भिस चार्जबापत १० प्रतिशत थप रकम जसरी पनि तिर्नुपर्ने कुरा बताए ।
अब मेनु प्राइसको कुरा गरौं । मूल्य अभिवृद्धिकर नियमावली २०५३ को संशोधन २०७३ ले मेनु प्राइसमा नै भ्याट वा सर्भिस चार्ज पनि समावेश गर्नुपर्ने भनेको छ । २०७३ सालको साउन १ गतेबाट (अध्यादेश कात्तिकमा पास भई कानुन बनेको) लागू हुनेगरी बनेको नियम २०७५ सालमा आइपुग्दा पनि अझै पनि पूर्णत लागू भएको छैन ।
मूल्य अभिवृद्धिकर नियमावली २०५३ को दफा १४ख मा करसहितको मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने बारे लेखिएको छ । यस बुँदामा भनिएको छ, ‘दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो औद्योगिक प्रदर्शनी कक्ष, बिक्री कक्ष, होटल, रेस्टुरेन्ट, बार, कारोबारस्थल वा आपूर्ति गर्ने स्थानमा राखिएको कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य (ट्याग प्राइस, मेनु प्राइस र सेल्फ प्राइस) मा करसहितको मूल्य उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।’
हामीले यही कुरा आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुङ्गेललाई सोध्यौँ । के भ्याटमा दर्ता भएको संस्थाले भ्याट बिल जारी नगर्न नि पाउँछ ? के मेनु प्राइसमा थप शुल्क जोडेर भ्याट र सर्भिस चार्ज लिन पाइन्छ ?
यस्ता रेस्टुरेन्ट वा होटलहरूले भ्याट बिल जारी नगर्दाचाहिँ कसरी बिल दिन्छन् त भनेर हामीले अर्को ट्रायल गर्यौँ । हामी फेरि अर्को दिन त्यही रेस्टुरेन्टमा पुग्यौँ र खाजा खायौँ । अर्को दिन पनि हामीलाई त्यही अप्सन दिइयो कि ‘भ्याट बिल कि सादा बिल ?’
ग्राहकले तिर्दिन भन्न पाउँछ : आन्तरिक राजस्व विभाग
छानबिन हुँदैछ, कारवाही गछौँ : राजस्व कार्यालय
रेस्टुरेन्टमाथि निगरानी बढाएका छौँ : आन्तरिक राजस्व विभाग